Ptengine: Khariidadaha kuleylka, Ololaha, Raadinta Beddelka iyo Falanqaynta | Martech Zone
Ptengine: Khariidadaha kuleylka, Ololaha, Raadinta Beddelka iyo Falanqaynta
Axad, Disembar 27, 2015 Sabtida, Juun 8, 2017 Douglas Karr
In kasta oo badan Analytics dhufto ee suuqa waa haraaga tiknoolajiyada in ka badan labaatan sano jir, tiknoolajiyada cusub ayaa si aad ah diirada u saaray dhaqanka isticmaalaha iyo falanqaynta masafka. Heatmaps-ku waa habab kaamil ah oo lagu arko sida isticmaaleyaashu ula falgalaan waqti ka dib qaabeynta bartaada, hagitaankeeda iyo wicitaan-ka-ficil. ptengine waxay soo bandhigeysaa qalab ururin si gaar ah loogu dhisay himilooyinkan.
Falanqaynta Khariidadda kuleylka - Isbarbar dhig khariidadaha kuleylka u dhexeeya bogagga kala duwan, xilliyada, iyo qaybaha aan xadidnayn si aad u aragto dabeecadaha booqdayaasha kala duwan.
Guji Heatmap - Muuji xogta gujinta muuqaal muuqaal heerkulbeeg ah, adiga oo si deg deg ah oo fudud u fahmaya dabeecadaha martida.
Heatmap Feejignaan - Xogta la soo ururiyey waxay caddeyn u tahay halka ay booqdayaashu xoogga saarayaan, waxay gacan ka geysaneysaa go'aaminta meeleynta xayeysiinta ugu fiican, waxay bixisaa macluumaad muhiim ah marka la qorsheynayo lana qaabeynayo bogagga soo degitaanka, waxay yareyneysaa ka tagitaanka dukaanka dukaamaysiga, waxay badineysaa beddelaadda foomamka internetka, waxayna saadaalinaysaa sida booqdayaashu u isticmaali doonaan boggaaga mustaqbalka .
La Socodka Aaladda Kala Duwan - raad raac iyo falanqeyn xogta dhammaan aaladaha iyo taageerooyinka boggaga lagu dhisay naqshad jawaab celin ah.
Falanqaynta bogga - aalad gorfayn xoog leh oo lagu soo ururiyo tirada qasabadaha walxaha is-dhexgalka iyo kuwa aan is-dhexgalka lahayn. Iyadoo aan loo eegin cunsurka, ka fahanto tirada saxda ah ee qasabadahaaga, sawirada, fiidiyowyada, hoos u dhig liiska iyo inbadan.
Khariidadda Gaarista Gaaban - ku dhaji riix iyo khariidadaha kuleylka dareenka si aad u bixiso boqolkiiba dhabta ah ee soo booqdayaasha u rogaya qaybo ka mid ah boggaaga. Hel aragti dhammaystiran oo ku saabsan sababta booqdayaashaadu u tagayaan mar alla markay ku soo degaan websaydhkaaga.
Falanqaynta Kooxda - Isticmaalka Madaxa Ciyaarta, Ciyaarta Dhamaadka, Ciyaarta saxda ah, iyo Regex, Ptengine waxay bixisaa habab kala duwan oo lagu falanqeeyo bogagga leh dhinacyada wadaagga ah, sida kabaha midabada kala duwan leh, gawaarida moodooyinka kala duwan leh, maqaallada qorayaasha kala duwan, bogagga degitaanka oo leh URLyo kala duwan. Badbaadso waqti aad kubixiso dib u hagaajinta URL-ka ololaha jira.
Ololayaasha - Abuur URL olole (ama u dhigma kuwa jira), oo falanqee taraafikada magaca, ilaha, dhexdhexaadka, muddada, iyo waxa ku jira.
Meelaha loo beddelayo - Baro meesha iyo sababta booqdayaashu u joojinayaan booqashooyinkooda, iyo sida ay ugu dhex wareegaan boggaaga oo dhan. Codso Heetmap-ka Ptengine Analytics Meeshaada loo beddelo 'Funnel' oo loo beddelo martida macaamiil.
Guudmarka waqtiga booqashada - aruurinta xogta taraafikada isticmaaleyaasha isku mar, taasoo kuu sahlaysa inaad si dhakhso leh oo wax ku ool ah suuqgeyn ugu sameyso.
Falanqaynta Juqraafiyeed - Waqtiga dhabta ah, tilmaama dadka isticmaala goobaha juqraafi ahaaneed
Faahfaahinta booqdaha - kormeer dhammaan xogta muhiimka ah ee soo booqdayaasha isku mar, sida waxqabadyada, hagidda nuxurka, nidaamyada hawlgalka, daalacashada bogagga, iyo bogagga gudbinta.
Saxiix u noqo Maxkamad Bilaash ah
Tags: dareenka khariidada kuleylkakhariidadda kuleylkadhagsii khariidada kuleylkadhagsii khariidaddaFalanqaynta khariidada kuleylkakhariidadaha kuleylkakhariidadaptengine
Douglas Karr Sunday, December 27, 2015 Saturday, July 8, 2017
Qiyaasaha Muhiimka ah ee Falanqaynta ee Suuqgeynta Gudaha
Xeeladaha Macaamiil ee ugu Wanaagsan ee Khadka Tooska ah